डा सीके राउतलाई जनकपुरमा भव्य स्वागत ( फोटो फिचर ) | News Madhesh
डा सीके राउतलाई जनकपुरमा भव्य स्वागत ( फोटो फिचर )
जनकपुरधाम,असार ११ गते : दुई सप्ताह युरोप भ्रमणबाट फर्केका जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. सीके राउतलाई आज जनकपुरमा भव्य स्वागत गरिएको छ ।
जनकपुर विमानस्थलमा भारी संख्यामा पुगेका जनमत पार्टीका नेता तथा समर्थकहरुले अध्यक्ष डा. राउतलाई भव्य स्वागत गरेको हो । भ्रमण सफल रहेकाले अध्यक्ष राउतलाई भव्य रुपले स्वागत गरिएको पार्टीका केन्द्रिय सदस्य इन्द्रजित यादवले जानकारी दिए । सयौंको संख्यामा मोटरसाइकलका साथ नेता तथा कार्यकर्ता जनकपुर विमानस्थलदेखि राउतको निवाससम्म स्वागत र्याली समेत निकालेका थिए ।
युरोप भ्रमणका क्रममा राउतले अष्ट्रियाको भियना विश्वविद्यालय र बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा लण्डन विश्वविद्यालयमा प्रवचन दिएका थिए । यसका साथै विभिन्न देशका नेता, संघसंगठन तथा आप्रवासी समुदायसँग भेटघाट पनि गरेको थिए । सोही क्रममा उनले आफूले विद्यावारिधी गरेको क्यामब्रिज विश्वविद्यालयको भ्रमण पनि गरेका थिए ।
फर्कने क्रममा उनले भारतको नयाँ दिल्लीमा असार ८ गते गैर आवासीय मधेशी संघको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पनि सहभागी भएका थिए । राउत भ्रमणबाट नेपाल आउने वित्तिकै बीर अस्पताल पुगेर उपचाररत साँसद रेशम चौधरीलाई भेटेका थिए ।
प्रकशित मिति : 2019-06-26